Imiyalezo yamaphephadonga, uyikhuphele kwi-Android yakho | I-Androidsis
I-Minions yayiziinkwenkwezi ezipheleleyo kwi-Gru's Despicable Me kwaye aba bantu bathandekayo banayo i-movie yabo. Ukuba uyabathanda abalandeli, uya kuzithanda ezi wallpapers sizifumana kweli candelo. Kungenxa yokuba unokhetho olukhulu lweemifanekiso zamaphephadonga ze-Android ezinabalinganiswa abathandekayo.
Guqula isikrini sakho sefowuni ngale mizobo yamaphephadonga, ekwenza uncumo rhoqo xa uzibona. Ungazibona zonke iimali ezikhoyo kwigalari engezantsi.
Khuphela okona kulungileyo Imizobo yamaphephadonga, Abalinganiswa abathandekayo abaDelekileyo kum ngoku abanomboniso bhanyabhanya kwaye baphumelele iintliziyo zabantu bonke ngee-antics zabo. Beka minion kwiselula yakho ye-Android okanye ithebhulethi.
Ngaba ufuna ngaphezulu imvelaphi yethebhulethi okanye iselfowuni? Kwikhonkco esilishiyileyo uya kubafumana.